Guddoomiyihii Elman FC oo is casilay, sheegayna inuu Kooxda sii garab taagnan doono – Gool FM
Guddoomiyihii Elman FC oo is casilay, sheegayna inuu Kooxda sii garab taagnan doono
Haaruun April 15, 2020
(Muqdisho) 15 Abril 2020. Guddoomiyaha Naadiga Kubbadda Cagta ee Elman, Cabdirisaaq Faarax Cumar (Goroje) ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii guddoomiyenimada, kaddib muddo 2 sano ah oo uu xilkaas hayay.
Mudane Goroje oo iscasilaaddiisa kaga dhawaaqay magaalada London ayaa sheegay in uu ka tagay oo kaliya xilka guddoomiyenimada arrimo isaga u gaar ah awgood, laakin Elman ay mar kasta ahaan doonto naadigiisa uuna aad u jecel yahay.
“Inta badan nolosheyda waxaan ku soo dhex jiray kubbadda cagta walina waan ku dhex jiraa, waana jeclahay kubbadda cagta, waana jeclahay naadiga Elman, waxaan ka tagay oo kaliya xilkii aan ka hayay, laakin waxaan caddeynayaa in aan diyaar u ahaan doono in aan kooxdeyda ku caawiyo wax kasta oo ay iiga baahto mustaqbalka, waxaana ka sii mid ahaan doonaa bahweynta kubbadda cagta Soomaaliya”ayuu yiri guddoomiye Goroje.
“Xilka guddoomiyenimo ee naadiga Elman FC ayaan ka tagay oo keliya sababo la xiriira aniga oo aan u heli karin waqti igu filan oo aan ku sii hoggaamiyo, taas ayaana ah sababta iscasilaaddeyda, wali jacayl aad u weyn ayaan u hayaa habweynta Elman, waxaana mar kasta ku faraxsanahay in aan caawiyo Elman iyo xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya intii karraankeyga ah.” ayuu hadalkiisa sii daba dhigay Mudane Goroje.
Intii uu talada hayay waxaa naadiga Elman loo aqoonsaday naadigii ugu fiicnaa dhanka maamul wanaagga sanadkii 2019-kii, iyadoo guddoomiye Goroje abaal-marinta lagu guddoonsiiyay xafladdii abaal-marinnada kubbada cagta Soomaaliya ee dhacday horraantii Janaayo ee sanadkan.
Mudane Goroje ayaa ah macallin dhanka gool-heynta ah wuxuuna shahaado heerka 1-aad ah ka heystaa FA-ga Ingiriiska.
Dalka Soomaaliya ayuu 3 sano ka hor ka hir-geliyay akadeemiyada tababarka gool-hayennimada, si dalkiisa uu wax ugu qabto, waxaana ka faa’iideystay carruur badan oo Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha iscasilay ee naadiga Elman ayaa ah Aabbaha dhalay Yoonis Faarax oo ka tirsan cayaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ee sameeyay taariikhda aan horay u dhicin kaddib markii ay sanadkii hore Soomaaliya ku hoggaamiyeen in ay badiso cayaar ka tirsan isreeb-reebka FIFA World Cup oo Soomaaliya intii ay jirtay aanay waligeed badin.
Arsenal oo dab ku sii shiday loolanka loogu jiro xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho
Kooxda Chelsea oo go’aamisay qiimaha ay ku iibineyso N'Golo Kanté